हप्तामा दुई पटक भन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्दा के फाइदा हुन्छ ? – rastriyakhabar.com
हप्तामा दुई पटक भन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
१५ बैशाख २०७९, बिहीबार ११:०७
काठमाडौँ । यौन सम्पर्क खासगरी विवाहित दम्पतीको दिनचर्याकै एउटा हिस्सा हो । नव–दम्पतीबीच रातमा कति पटक यौन सम्पर्क स्थापित हुन्छ । जब उमेर ढल्कदै जान्छ वा बैवाहिक जीवन लम्बिदै जान्छ, यौन सम्पर्कको दर पनि क्रमस घट्दै जान्छ ।
थुप्रै दम्पतीबीच यौन सक्रियतामा असन्तुलन हुनेगर्छ । कतिले आफ्नो पार्टनर यौनमा उदासिन भएको बताइरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी कतिले आफ्ना पार्टनर यौनमा बढी नै सक्रिय हुने गुनासो गर्छन् । जबकी यौन सम्पर्कमा दुबैको रुची, उत्सुकता र सक्रियता समान हुनुपर्छ । यदि त्यसो भयो भने यौन जीवन सुखमय हुने एक अध्ययनले बताएको छ।
अक्सर दम्पतीको यौन सम्बन्धमा तालमेल मिलिरहेको हुँदैन । यहि कारणले उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आउँछ । र विस्तारै मनमुटव हुनेगर्छ । कतिपय अवस्थामा त डिभोर्स पनि हुने गरेको कुरा हामी सुन्न सक्छौं।
जब पार्टनरबाट यौन सन्तुष्टि मिल्दै उनीहरुले अर्कैतिर त्यसको विकल्प खोज्न थाल्छन् । पति वा पत्नी दुबैको हकमा यस्तो हुनसक्छ । त्यसैले यौन सम्बन्धमा दुबै पति पत्नी सक्रिय हुनुपर्छ ।